Sawirka shaashadda / daabacaadda dharka → daabacaadda shaashadda mihnadda ee dharka
Daabacaadda shaashadda waa mid ka mid ah hababka calaamadaha ugu caansan ee inta badan loo doorto funaanado xayeysiin ah, tosho ama aaladaha xayeysiinta qaarkood sida bacaha lub saftay. Nooca daabacaadda ah waxay sida ugu fiican ugu shaqaysaa dusha sare iyo fidsan iyo sidoo kale dhar khafiif ah, oo ka duwan daabacaadda kumbuyuutarkakaas oo lagula talinayo sawirada yar yar iyo agabyada waxyar ka dhumuc weyn kana culus.
Daabacaadda shaashadda - waxay ku habboon tahay naqshadaha waaweyn ee dusha sare
Sawirada, astaanta ama qoraalka lagu sameeyay daabacaadda shaashadda oo tayo sare leh ayaa u adkeysanaya ma aha oo kaliya in la isticmaalo, laakiin sidoo kale in lagu dhaqo heerkulka sare. Waa hab kharash wax ku ool ah oo lagu saxo oo la xidhiidha tayadiisa. Daabacaadda shaashadda, shaashad ayaa loo isticmaalaa, halkaas oo uu rinjiga ku faafayo mesh oo dhan oo leh daab dhakhtar. Rinjiga dharbaaxo ku dhufta dharka ayaa si joogto ah isku xidha oo dhex gala.
Kooxdayadu waxay soo bandhigaan astaan ​​kasta oo la xushay ama qoraal ay ku daabacaan shaashadda.
Matrix daabacaadda shaashadda
Noocyo ballaaran oo midabyo daabacan shaashad ah
Faa'iidada ugu weyn ee daabacaadda shaashadda waa awoodda wax loo abuuro sawirada midab kasta. Markaad daabacanayso dharka, sawirada ku jira w midabbo kulul oo muujiya.
Faa'iido dheeri ah ayaa ah ikhtiyaarka hooska. Rinjiga waa la isku qasi karaa. Barnaamijyada kombiyuutarka ee loogu talagalay nidaamka isku dhafka rinjiga ayaa si sax ah u xisaabiya naxwaha midabka loo baahan yahay si loo sameeyo midabka ugu saxsan ee loo adeegsan doono badeecada.
Daabacaadda shaashadda ayaa u adkeysata dhaqidda, waxaa lagu dhaqi karaa mashiinnada dharka lagu dhaqo oo otomaatig ah oo leh ikhtiyaar wareega. Xaaladda ayaa ah daabacaadda saxda ah ee dhammaan geeddi-socodka wax soo saarka iyo midabyo tayo sare leh.
T-Shirt oo leh shaashad shaashad daabacan
Qiimaha daabacaadda shaashadda waxay kuxirantahay wareegga wareegga
Qiimaha daabacaadda shaashadda waxay kuxirantahay dadaalka. Taasi waa sababta ugu wanaagsan ee loogu doorto amarro waaweyn. Diyaarinta shaxda waa kharash go'an, kana madax banaan dadaalka.
Sidoo kale, haddii aan dooneyno inaan sameyno gabal tijaabo ah oo ah funaanad ama shandad tusaale ah, waa inaan tixgelinno qiimaha diyaarinta shaxda. Qaabkan daabacaadda, midab kasta waxaa loo adeegsadaa si gooni ah, iyada oo loo marayo shaashad gaar ah.
Waxay ku lug leedahay diyaarin shaxda u gaar ah midab kasta. Si kastaba ha noqotee, wax badan kuma xirna dadaal badan. Waxay si aad ah ugu shaqeysaa amarro waaweyn oo loogu talagalay dhacdooyinka isboortiga, abaalmarinta tartamada ama kooxo badan oo shaqaale ah.
Kala duwanaanta daabacaadda shaashadda
Daabacaadda shaashadda waxaa ku leh caan ahaanshaheeda ballaaran, waxaa loo isticmaali karaa calaamadeynta cudbiga iyo qalabka caagga ah, iyo xitaa calaamadeynta qoryaha. Daabacaadda shaashadda ayaa badanaa loo doortaa dharka iyo xayeysiinta dharka. Daabacadaha ayaa u adkeysanaya dhaawaca farsamada, iftiinka qoraxda iyo qoyaanka.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nalashaqeyso saxiixa wuxuu leeyahay khibrad sannado badan calaamadeynta xayeysiinta iyo dharka shaqada. Waxaan haynaa badeecooyin kala duwan oo xul ah, kooxdeenuna waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso doorashada iyo sida loo daabaco.
Calaamadaha funaanadahaT-shaati oo daabacandaabacaadda funaanadahaku daabac dharkadaabacaadda dharkadhar astaan ​​lehdharka leh daabacaadda shaashaddadhar sumadaysanPolos leh magacdaabacaadda shaashaddawareejinta heerkulkadhar daabacan